Maraykanka oo dib u bilaabay duqaymaha kadhanka ah Al-shabaab - Tilmaan Media
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa deegaano katirsan dowlad goboleedka Galmudug ka socday guluf dagaal oo ka dhan ah kooxda Al-shabaab iyadoo deegaano ay gacanta ku haysay lagala wareegay. Hawlgalkaan ayaa ah kii ugu xooga badnaa oo ka dhaca deeganada Galmudug tan iyo inta la xasuusto.
Waxaa hawlgalkaan ka wada qayb qaadanaya ciidamnka xooga dalka, ciidanka Danab iyo ciidanka daraawiishta Galmudug. Illaa iyo hadda waxaa Al-shabaab laga sifeeyay deegaano dhawr ah iyo saldhigyo kuyaalay inta u dhaxaysa Qeecad iyo degmada Hobyo ee gobolka Mudug.
Hawlgalladaan waxaa garab socday duqaymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday saldhigyada Al-shabaab. Duqaymadaan waxaa fuliyay diyaarado Maraykanku leeyahay waana markii ugu horaysay oo duqaymo noocaan ah dhacaan kadib go,aankii madaxwaynihii hore ee Maraykanka Donuld Trump oo ciidamada Maraykanka kaga saaray Soomaaliya.
Sida ay sheegeen saraakiil Maraykan ah maamulka madaxwayne Joe Beydan wuxuu qiimayn ku hayay mudooyinkii lasoo dhaafay habka ugu wanaagsan ee Maraykanku uga qayb qaadan karo ladagaalanka Al-shabaab. Waxaa la rumaysan yahay in maamulka Beydan ay soo gaba gabeeyeen dib u eegidda hawlgaladooda Soomaaliya haatana ay bilaabatay fulinteedu.
Hawlgallada socda ee kadhanka ah Al-shabaab ayaa la rumaysan yahay inay aad u wiiqi doonaan awoodda hawlgaleed ee xarakada oo mudooyinkii lasoo dhaafay fursad fiican ka heshay istaagidda duqayntii Maraykanka iyo tabar-yari dhanka Soomaalida ah.